6-da kulan ee ugu fiican ee stickman ee Android | Androidsis
6-da kulan ee ugu fiican ee stickman ee Android
Haaruun Rivas | 19/07/2021 10:15 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Stickmen, sidoo kale loo yaqaan shakhsiyaadka usha, waa mid ka mid ah jilayaasha ugu qosolka badan ciyaaraha Android. Sababtaas awgeed ayaan u aragnaa inay yihiin halyeeyada cinwaannada badan ee Google Play Store, haddana waxaan soo uruuriney qaar si aad ugu raaxeysan karto.
Waxaan soo bandhigi liiska Top 6 Ciyaaraha Stickman ee loogu talagalay Android in aad hadda heli karto. Dhammaantood waa bilaash, dabcan, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee laga soo dejiyo dukaanka, maadaama ay sidoo kale tahay mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan buugga.
Hoos waxaad kaheleysaa taxane ah 6-da kulan ee ugu fiican ee loo yaqaan 'stickman games' ee casriga ah Android. Waxaa xusid mudan, sida had iyo jeer aan yeelno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha noqotee, mid ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan nidaam lacag-bixin yar oo gudaha ah, kaas oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale helitaanka fursado badan oo lagu ciyaaro heerarka, walxo badan, abaalmarinno iyo abaalmarinno, iyo waxyaabo kale. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Duuliyaha sare ee kooxda
2 Xisbiga Stickman: 1 2 3 4 Ciyaaraha Ciyaaraha Bilaash
3 Stickman Shinobi: Ninja Dagaal
4 Stickman Kala Baxa
5 Stickman Soccer 2014
6 Infinity Stickfight Infinity
Duuliyaha sare ee kooxda
Ciyaaraha Stickman, guud ahaan, waxaa lagu gartaa inay yihiin kuwa ugu fudud. Si kastaba ha noqotee, tani caqabad kuma ahan inay noqdaan mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan isla markaana asalka ah isla waqtigaas.
Stickman Sare Duelist waa mid ka mid ah cinwaannada ugu fudud ee heerka sawirada, laakiin sidoo kale waxay ka kooban tahay dagaallo macquul ah oo ay ugu mahadcelinayaan animations si fiican loo farsameeyay oo ka jawaabaya fiisigiska waxayna bixiyaan khibrad aad u wanaagsan oo ciyaaraha ah. Ciyaartana waa inaad wajahdaa kuwa kaa soo horjeeda, kuwaas oo sii kordhaya dhibkooda si tartiib tartiib ah iyo xaalad kasta oo cusub oo dhacda ka dib marka laga gudbo heer kasta oo ciyaarta ah.
Waxa kale oo jira saddex hab oo ciyaartoy ah, kuwaas oo ah kali, labo (saaxiibkiis leh) iyo qaab badbaado. Xulo kan aad doorbideyso ugu badan oo bilow inaad la dagaallanto kuwa kaa soo horjeeda si aad u noqotid dagaalyahanka ugu xoogga badan Stickman dhammaan.
Developer: Neron walaalkiis
Xisbiga Stickman: 1 2 3 4 Ciyaaraha Ciyaaraha Bilaash
Stickman Party waa ciyaar kale oo weyn oo loogu talagalay Android, iyada oo ay suurtagal tahay in lagu ciyaaro kaligiis ama ilaa 4 ciyaartoy. Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah inaysan u baahnayn qadka internetka ama Wi-Fi maxaa yeelay waxaa laga wada ciyaari karaa isla mobilada adiga iyo saddexda ciyaartoy ee kale ee aad rabto, maadaama ay mid kastaaba leedahay joysticks.
Ciyaartaani waa mid aad u xiiso badan haddii aad la ciyaarto asxaabtaada, laakiin qaab keli ah weli waad ku baari kartaa hab madadaalo leh, intaad ku tababaraneyso xirfadahaaga oo aad tababar qaadaneyso ka dibna aad la ciyaareyso asxaabtaada. Waxaana jira kuwa kale oo ciyaartan ah oo ay ku jiraan ciyaar kubbadda cagta ah, midabbada rinjiga, kubbadda soo kabashada, isku dhaca shabaqa, tartamada baabuurta isu soo baxa yar yar, taangiyada iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaa jira ilaa 30 ciyaarood oo yaryar oo Stickman Party ay tahay inuu ku baashaalo oo aad iyo aad iyo aad u badan oo kale ayaa lagu darayaa.
Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah cayaaraha ugu fiican ee nooceeda ah, wax ay horey ugu soo uruurisay in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah, in ka badan 1 milyan oo faallooyin wanaagsan ah iyo qiimeyn xiddig 4.4 ah oo lagu ixtiraamo Google Play Store. telefoonnada gacanta.
Developer: Ciyaaraha Playmax
Stickman Shinobi: Ninja Dagaal
Haddii aad tahay taageere anime iyo, xitaa intaa ka sii badan, ee Naruto iyo Naruto Shippuden, ciyaartaan cayayaanka ah waa adiga. Jilayaasha aad ka heli doontid midkan waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee Naruto, sidaa darteed Sasuke, sida Madara Uchija, Tobi (Obito), Itachi iyo kuwa kale oo dheeri ah, ayaa ka soo muuqanaya ciyaarta, mid kasta oo leh farsamooyin cajiib ah oo daacad u ah taxanaha Jabbaan.
Mid kasta oo ka mid ah ulleyda ayaa ka faa'iideysan kara awoodaha iyo awoodaha u dhigma waxa aan ku aragno anime. Tusaale ahaan, Madara waxay u adeegsan kartaa Susanoo si ay isaga ilaaliso weerarada cadowga, halka Itachi, Sasuke, iyo Obito ay sidoo kale isticmaali karaan Sharingan oo ay u isticmaali karaan awooda indhaha. Naruto, dhanka kale, waxay isticmaali kartaa dawacada sagaalka leh, isla mar ahaantaana uu Gaara ciidda dhinac kaga jiro. Sakura iyo Kakashi sidoo kale maaha kuwo layaableh maqnaanshahooda ciyaartan caanka ah ee loo yaqaan 'Stickman Stickman' ee mobilada Android.
Waxay leedahay epic, cutscenes si fiican loo farsameeyay oo loogu talagalay dagaal kasta, oo leh sawirro dhab ah oo maskaxeed iyo animations, iyo dhawaaq heeso ah oo kugu siinaya waxqabadka si fiican. Su'aasha, waxaa jira 10 khariidado, 300 heer laga bilaabo fudud ilaa dhib iyo ilaa 30 madax oo ay tahay inaad ka adkaato si loo caddeeyo inaad tahay dagaalyahan ninja ugu wanaagsan dhammaan. Dabcan, inaad iyaga siiso dagaal wanaagsan, waxaad heli kartaa horumarinno kordhin doona xoogga jilayaashaaga, si aad uga guuleysato qof kasta oo kaa hor istaaga ninja.
Marka hore, waxaad leedahay xirmo dabeecad bilow ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah halyeeyada waaweyn ee Naruto. Markaas ayaad kuwa kale ka heli kartaa wax badan oo aad ku furan kartaa abaalmarinno cusub heer kasta oo laga gudbay.
Stickman Kala Baxa
Stickman Dismounting waa ciyaar kale oo aad u wanaagsan oo waqti kasta la dhigto, xitaa marka aadan haysan qadka internetka iyo Wi-Fi. In kasta oo ay soo bandhigayso sawiro iyo animations fudud, waxay leedahay nidaam fiisikis oo ka dhigaya dhaqdhaqaaqa iyo falcelinta walxaha mid macquul ah.
Dabcan, sida ciyaarta kale ee weyn ee weyn, tan Waxay la timid adduunyo kala duwan oo waxyaabaha si tartiib tartiib ah ugu adkaadaan heer kasta oo la soo dhaafay. Marka ugu horeysa wax waliba waxay umuuqdaan kuwa fudud, laakiin markaa waxaad garwaaqsanaysaa inaysan sidaa usii fududaan oo heerarka dambe ay ubaahan doonaan in badan oo caqligaaga ah iyo awooda xalinta dhibaatooyinka.
Dhinaca kale, cinwaankan stickman wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeejiso heerarka leh qalab kala duwan waxayna sidoo kale ku faantaa nidaam ku celis ah oo leh keyd iyo is dhaafsi xirfado. Waa mudan tahay isku day; sumcaddeeda 4.3 xiddig iyada oo ku saleysan in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah iyo in ka badan 400 kun oo faallooyin togan ayaa muujinaya tan.
Developer: Ciyaaraha Viper
Haddii aad tahay taageere kubbadda cagta oo aad jeceshahay inaad ciyaarto cayaartan, Stickman Soccer 2014 waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee aad hadda ku sameyn karto Google Play Store. Cinwaankani wuxuu soo bandhigayaa sawir gacmeedyo sifiican loo farsameeyay iyo dheecaan dareere ah iyo ciyaar soo jiidasho leh oo qof walba ku xirmi doonta. Intaas waxaa sii dheer, astaamaheeda ayaa ah kuwa ugu majaajilada badan dhaqdhaqaaqooda iyo fiisigiskooduna aad ayey u fiican yihiin, sidoo kale codka ayaa ah.
Xakamaynta fudud ee ciyaartan waxay si aad ah ugu fududahay in lagu jiheeyo ciyaartoyda inay ka adkaadaan cadawga. Waxaa jira in ka badan 40 koox oo adduunka ah, dhammaantood leh dhalashooyinka ugu caansan ee jooga Koobka Adduunka ee FIFA. Dooro midka aad jeceshahay ama aad adiga ku metelayso oo bilow xilli ay ka buuxaan kubbadda cagta iyo waxqabadka.
Waad dooran kartaa oo ciyaari kartaa koobab badan, oo ah kuwa ugu daawashada badan isla markaana leh taageerayaasha ugu weyn, sida Koobka Mareykanka, Koobka Yurub, Koobka Adduunka, iyo inbadan oo ay tahay inaad guuleysato. Waxa kale oo jira qaabab badan oo ciyaarta ah oo aad kala dooran karto, sida kuwa ku jira Rikoodhad Ciqaabeed (ciqaab), Kubadda Cagta iyo Wadada Kubadda Cagta (kubbadda cagta), iyo kuwo kale. Dabcan, kulankaan wuxuu la jaanqaadayaa midka dhabta ah, oo leh farsamooyin qaladaad, ganaaxyo, baasas dheer ama la sifeeyay, animations guuleystay iyo inbadan.
Astaamaha kale ee Stickman Soccer 2014 waxaa ka mid ah laba qaab oo ciyaarta ah 11 vs 11 iyo 4 vs 4. Waxa kale oo jira garoomo kubbadeed oo tiro badan oo xiisaha ka ilaaliya inay noqdaan kuwo keli ku ah saacadaha. Isla mar ahaantaana, waxaa jira nidaam qiimeyn adduunyo ah oo aad ku cabbiri karto natiijooyinkaaga ciyaartoyda kale ee adduunka oo aad ku horumarin karto inaad noqoto lambarka koowaad. Inta soo hartay, heerka cusbooneysiinta ee uu kulankaan la jaan qaadi karo waa 60 FPS (60 wareeg ah ilbiriqsi kasta), sidaa darteed dareeraha animations-yada ayaa aad ufiican.
Infinity Stickfight Infinity
Si loo dhammeeyo qoraalkan isku-dhafan ee kulammada ugu fiican ee loogu talagalay Android, waxaan leenahay ciyaar kale oo aad u fiican iyo ciyaar dagaal, taas oo ah Stickfight Infinity, mid ku tiirsan firfircoonaan xiiso leh, oo leh astaamo midabo leh oo madax-ilaa-madax u socda si ay u muujiyaan midka ugu fiican iyo sababta. Isticmaal taada oo u qaado guusha markasta, oo leh xirfado caajis ka dhigidoona wax hore ujiray iyo wax aan caan ku aheyn cinwaankan moobiilka ee caanka ah ee Android
Stickfigth Infinity waa ciyaar lala ciyaaro qaab olole leh heerar aan dhammaanayn oo ka dhib badan markasta. Waxay kaloo leedahay hub fara badan oo aad u adeegsan karto inaad kaga adkaato kuwa kaa soo horjeeda duruufo dagaal oo kala duwan oo ay tahay inaad ogaato oo aad wax badan ka beddesho. U bood, dhaqaaq, toogasho oo weerar qof kasta oo isku daya inuu kaa baabi'iyo adduunka si aad u hesho sharafta. Ha u ogolaan in shaqsi kale oo dhejis ah uu kaa adkaado oo ku bahdilo. Adiga kaliya ayaa isku caleemo saari kara inaad tahay kan ugu awooda badan dhamaantiis, adduun aan naxariis iyo is cafin jirin.
Waxaa jira in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah oo cinwaankani ku faano, oo leh sumcad wanaagsan oo qiyaastii ah 4.2 xiddigood oo ku jira Play Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6-da kulan ee ugu fiican ee stickman ee Android
Redmi Buds 3 Pro, falanqaynta, qiimaha iyo ra'yiga
Ciyaaraha Harry Potter ee ugu wanaagsan Android